သူ အပိုင်း (၅) - For her Myanmar
သူ အပိုင်း (၅)
ဆုရည်တစ်ယောက် ရင်တွေခုန်လာသည်။ ကောင်းသောခုန်ခြင်းတော့မဟုတ်။ ဆိုးဆိုးရွားရွားတစ်ခုဖြစ်ခါနီးပူပန်စွာခုန်ရသည့်ရင်ခုန်ခြင်းမျိုး။
‘မိန်းမ နင်ကောင်းခန်းကျမှမရပ်နဲ့’ ဟူသောအသံအပြီး ဘုတ်ခနဲအသံနှင့်အတူ မွှေးပွရုပ်တစ်ရုပ်ကသူမ၏ခေါင်းကိုလာမှန်ပြီး ဟန်ချက်ကိုဖျက်လိုက်သည်။ သူမကအပိုဟန်လုပ်သည့်အနေဖြင့် ထိုင်လက်စကုတင်ပေါ်တွင် ဘေးတိုက်လှဲချရင်းညည်းတွားလိုက်သည်။
‘အား ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်။ မေသက်ရေ~~~~!’
‘အပိုကလုပ်ပြန်ပြီ’ ခတ္တာကမျက်စောင်းရွရွထိုးရင်းရေရွတ်သည်။ သူမတို့သုံးယောက်၏ ရက်သတ္တပတ်ကုန်တိုင်းလုပ်နေကျဖြစ်သော စု၍စကားပြောသောအချိန်တွင်းဖြစ်သည်။ ဆုရည်ကရယ်ရင်းပြန်ထိုင်သည်။ တိုင်းတစ်ပါးတွင်နေသော မေသက်ဆီသို့သူတို့နှစ်ယောက်တစ်ပတ်တစ်ခါတော့ voice call ဖြစ်ဖြစ် video call ဖြစ်ဖြစ်ခေါ်နေကျ။
‘နင်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းဟယ်။ ဝေးတသက်သက်၊ နီးတကျက်ကျက်။ ဆုရည်ရယ် ဆက်ပြော။ ဟိုကအဲဒီလိုအတည်ပေါက် ရည်းစားစကားပြောတော့နင်ကဘာပြန်ပြောလဲ?’
ခတ္တာကဝင်စွက်ပြန်သည် ‘နင်ဟိုတစ်ခါကလို အရွှန်းဖောက်သလိုလိုနဲ့ လျှောထွက်ရင် ငါနင့်ကိုရိုက်မှာနော်’ ပြောရင်းနဲ့သူ့လက်လေးကိုပါ ဆကြည့်လိုက်သေးသည်။ ဆုရည်ကထိုတစ်ယောက်ကို ဥပေက္ခာပေးခြင်းဖြင့်ထားလိုက်သည်။
‘အဲဒါပဲလေ။ သူကပြောတော့ငါကဘာပြောရမလဲ။ စဉ်းစားမယ်ပေါ့ဟာ’
‘ခတ္တာရယ်။ လေ့လာရမှာပေါ့။ မိဘမျိုးရိုး ဘာ ညာ။’ …. မေသက်ကတစ်ဘက်မှ တွေးတွေးဆဆဖြင့်ပြောသည်။
‘ဆုရည်နေနေတာမြန်မာပြည်လေဟာ။ ဒါမျိုးတွေက လိုတယ်လေ။ စဉ်းစားရမှာပေါ့’
Related Article >>> သူ အပိုင်း (၄)
‘ကဲ ဖီလိုဆိုဖီမမရယ်၊ လက်လက်ထရယ်’ သူမကထပြီးဟန့်ရသည်။ ‘တော်ကြတော့’ အသံများရပ်သွားသည်။ ‘ပြော။ နင်တို့နှစ်ယောက်သာငါဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲ’
‘ငါ့သဘောကတော့ ဆုရည်က ချင်ချင်းအဖြေပေးသင့်တယ်လို့ထင်တယ်’
‘ဘာကြောင့်လဲ?’ မေသက်ကပြန်မေးသည်။ ထိုမှစ၍ ဆုရည်ဘာမှပြန်မပြောတော့။ သူတို့နှစ်ယောက်ကိုသာဆွေးနွေးခိုင်းတော့မည်။ ဝင်ပြောလည်းတိုး၍ပေါက်မည်မဟုတ်။ ထိုနှစ်ယောက်ငြင်းလျှင်တခါတရံ ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့။
‘ဒီလိုဟာ။ သူကကြိုက်တယ်။ ဟိုကလည်းကြိုက်တာပဲ။ ဆိုတော့ ဘာလို့အချိန်ဆွဲမှာလည်း။ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်လေးတွေသုံးပြီးတော့ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်သိအောင်လုပ်ပေါ့ အဟိဟိ။’ ခတ္တာကရယ်ကြဲကြဲဖြင့်ဖြေသည်။
‘မဟုတ်ဘူးလေ။ အဲဒီလိုရင်းနှီးတာကတစ်မျိုး။ နောက် သမီးရည်းစားလိုသိတာကတစ်မျိုးလေ။ မတူဘူး။ စိတ်ခံစားချက်ကအဓိကကျတယ်။ Chemistry ပေါ့ဟယ်။ လူနှစ်ယောက်ကြားမှာ chemistry လို့ခေါ်တဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကိုဆွဲထားတဲ့ သံလိုက်-‘
‘နင်ကဗျာမဆန်လွန်းနဲ့။ ရှင်းအောင်ပြော။ နင့် အယ်ချုပ်အတွက်အမှာစာကို shadow ရေးပေးတာမဟုတ်ဘူး’
‘ဒီလိုဟာ။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ chemistry ရှိတုန်းလေး reaction ဖြစ်သွားတာမကောင်းဘူးလား? နှစ်ယောက်လုံးလည်းအသည်းအသန်စိတ်ဝင်စားနေတာကိုး။’
Related Article >>> သူ (သို့) ဘုရားပေါ်မှရင်ခုန်သံ အပိုင်း(၃)
‘ခတ္တာရဲ့ နင်ကအဲဒီလိုပြောတော့သာလွယ်တာ။ တကယ်ကျတော့ စဉ်းစားသင့်တယ်နော်။ နင်ပြောသလို စိတ်နောက်လိုက်ပြီးတော့ သူနဲ့ရည်းစားတွေဖြစ်သွားပြီထား။ ပြီးတော့ သူ့ဆီမှာသူမကြိုက်တဲ့အချက်တွေရှိနေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?’
‘ကဲ ဖြတ်လို့မရတော့လောက်အောင် နင်တို့နှစ်ယောက်သံယောဇဉ်တွယ်မိနေတယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ?’
‘မေသက်ရယ်။ လွမ်းစရာကိုနာစရာနဲ့ဖြေရတယ်ဟဲ့’ တစ်ဘက်ကမေသက်က သက်ပြင်းချသည်။
‘ခတ္တာရယ်။ မြန်မာပြည်လေဟယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရည်းစားရာဇဝင်ကိုအလုပ်လျှောက်လွှာလိုအလေးထားတဲ့နိုင်ငံလေ။’
‘နင့်လိုပေါ့ပေါ့တန်တန်တွေးတဲ့မိန်းမတွေကြောင့် အိမ်ထောင်ပျက်တွေများတာ’ မေသက်၏စကားအဆုံးဝယ် အားလုံးတိတ်ဆိတ်သွားကြသည်။ မေသက်စကားလွန်သွားသည်ကို အားလုံးသိလိုက်သည်။ ခတ္တာကပျော်ပျော်နေတတ်သော်လည်း ပေါ့တန်သူမဟုတ်။ သူ့အတွေးနှင့်သူရှိသည်။ ဆုရည်တစ်ယောက် ရင်တွေခုန်လာသည်။ ကောင်းသောခုန်ခြင်းတော့မဟုတ်။ ဆိုးဆိုးရွားရွားတစ်ခုဖြစ်ခါနီးပူပန်စွာခုန်ရသည့်ရင်ခုန်ခြင်းမျိုး။ သူမကဖုန်း screen ကိုကြည့်လိုက် ရုပ်တည်သွားသော ခတ္တာကိုကြည့်လိုက်နှင့် တစ်ခုခုကိုပြောလည်းပြောချင်သော်လည်း မပြောရဲဖြစ်နေသည်။ ခတ္တာကမဲ့ပြုံးတစ်ချက်ကိုပြုံးလိုက်သည်။
‘အေး။ နင့်လို ရှိသမျှအရာကိုလေးနက်လွန်ပြီး ပူပန်လွန်းတဲ့မိန်းမတွေက အပျိုကြီးဖြစ်ရင်ဖြစ် ယောကျာ်းယူလည်း အဲ့ဒီယောကျာ်းက တိတ်တိတ်ပုန်းခြေများတာ’ တိုက်ပွဲကတော့ စလေပြီ။
Tags: fiction, Fun
Rosie August 29, 2017